Chrome Steel Ball ဖြစ်သည်
Stainless Steel Ball ဖြစ်သည်
နက်ရှိုင်းသော Groove Ball Bearing
Tapered ကြိတ်စက် Bearing
Cylindrical Roller Bearing များ၊
Thrust Ball Bearing များ၊
21-09-14 တွင် admin မှ
သံမဏိဘောလုံးများသည်အဘယ်ကြောင့်သံချေးတက်ကြသနည်း။ သံမဏိဘောလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အညိုရောင်သံကွက်များပေါ်လာသောအခါလူအများအံ့သြသွားကြသည် -“ သံမဏိသံမဏိသံချေးတက်ခြင်းမရှိ။ သံမဏိသံချေးတက်လျှင်သံမဏိမဟုတ်။ သံမဏိနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ” တကယ်တော့ဒါက ...
21-09-06 တွင် admin မှ
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာလုပ်ငန်းတွင်သေးငယ်သောတိကျသောဘောလုံးများကိုအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များတွင်သုံးသည်။ သေးငယ်သောတိကျသောဘောလုံး၏အဓိပ္ပါယ်သည် ၁/၈ လက်မ (၃.၁၇၅ မီလီမီတာ) ထက်နည်းသောဘောလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည်အသုံးများသောအသုံးများကိုဖော်ပြသည်။
21-08-23 တွင် admin မှ
၁။ တင်ဆောင်လာသည့်ဒြပ်စင်အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အင်အားသည် radial load တစ်ခုအား bearing တစ်ခုသို့အသုံးချသောအခါ ၀ န်တင်သော rolling element အရေအတွက်သည်လည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၂။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးခြင်း
21-08-16 တွင် admin မှ
ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံးများသည်နာမည်ခေါ်သည့်အတိုင်းကာဗွန်သံမဏိကုန်ကြမ်းများမှပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဘောလုံးများဖြစ်သည်။ ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံးများကိုကာဗွန်ပါဝင်မှုအလိုက်အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံး (၀.၀၄%~ ၀.၂၅%)၊ အလယ်အလတ်ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံး (၀.၂၅ ~ ၀.၆%) နှင့်အဆင့်မြင့်ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံး (၀.၆%~ ၁.၃၅%) ဂ ...
Liaocheng သည်“ China Bearing Trade City” နှင့်“ China Bearing Industry City” ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။
21-08-09 တွင် admin မှ
ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Liaocheng မှာ bearing အမှတ်တံဆိပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒေသတွင်းကျော်ကြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေနည်းနည်းတော့ရှိတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Liaocheng ၏အစည်းအဝေးနှစ်ခု၌ Liaocheng ၏စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသင်းက“ ဒေသတွင်းအမှတ်တံဆိပ်များတည်ဆောက်ခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်” ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
21-08-02 တွင် admin မှ
disassembly ပြီးနောက်ပျက်စီးနေသော rolling bearing ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးသွားသော bearing ၏အခြေအနေအရအပြစ်ရှိသည်နှင့်ပျက်စီးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ၁။ ပြေးလမ်းမျက်နှာပြင်မှသတ္တုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း The bearing rolling elements and the inner and outer ring raceway မျက်နှာပြင် ...
Bearing Failure ကိုလေ့လာခြင်း
21-07-26 တွင် admin မှ
ဝက်ဝံများသည်တိကျသောစက်၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဖောက်သည်များသည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများအနေနှင့်အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
21-07-19 တွင် admin မှ
မီးရထားစတော့ရှယ်ယာဝက်ဝံများသည်စက်ခေါင်းနှင့်ယာဉ်များတွင်သုံးသောဝက်ဝံများကိုရည်ညွှန်းသည်။ စက်ခေါင်းများပေါ်ရှိဝက်ဝံများတွင် axle box bearings, traction motor bearings, transmission system bearings, power unit of bearings and bearings of the cooling system, etc.
21-07-12 တွင် admin မှ
21-07-01 တွင် admin မှ
21-06-23 တွင် admin မှ
21-06-17 တွင် admin မှ
သံမဏိဘောလုံးများအတွက်အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်သံမဏိဘောလုံးများအတွက်သံမဏိဘောလုံးများအတွက်အသုံးပြုမှု၏အထူးလိုအပ်ချက်များကြောင့်သံမဏိဘောလုံးများသည်၎င်းတို့၏ကုန်ချောပစ္စည်းများမှလိုအပ်သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းများနှင့်အညီအဆက်မပြတ်တိုးတက်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထွေထွေ ...
လိပ်စာChuangye အဆောက်အအုံ၊ Dongchang အရှေ့လမ်း၊ Liaocheng City၊ Shandong ပြည်နယ်၊ တရုတ်
အလုပ်ချိန်တနင်္လာ-သောကြာ၊ နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၆ နာရီ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ
ကြေးနီဘောလုံးလေးများ, Brass Ball Check Valve သည်, H62 ကြေးဝါဘောလုံး, H65 ကြေးဝါဘောလုံး, Brass ဘောလုံး, Pure Solid Copper Ball ဖြစ်သည်,